Colorado Potato Beetle - Chiratidzo Chinodzivirira Tupukanana - Potatoes News
Colorado mbatata nyuchi - mucherechedzo unodzivirira zvipembenene
Colorado Potato Beetle (CPB) ichiri nhamba yekutanga yezvipembenene zvinokanganisa mbatatisi pasirese. Muvengi anotyisa; yakasiiwa isina kudzorwa inogona kugumisa goho, asi inogona zvakare kukurumidza kugadzirisa uye kuvaka kushora kumakemikari ekudzora.
"Beetle beetle inonzi inonzi poster insect yekudzivirira - yakawanikwa senzira yekukunda huwandu hwezvipembenene zvatakakanda kwazviri," anodaro Bill Moons, nyanzvi yekuvandudza misika yeBayer Crop Science. Kubva zvavakatanga kuziviswa, neonicotinoid kurapa kwembeu kwakaratidza mutsetse unoshanda kwazvo wekudzivirira kurwisa CPB, asi izvi zviri kushomeka zvakanyanya mumativi enyika, Mwedzi inoti.
“Ruzhinji rwemaeka ruchiri kuwana neonicotinoid kumberi. Pavakatanga kuziviswa, tanga tichiwana mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu ekudzivirirwa, asi zviri pasi pemazuva makumi mashanu kusvika makumi matanhatu mune mamwe matunhu, saka kudiwa kweimwe nzira yekuita inofanirwa, ”anodaro. "Tine nyaya dzinokosha muManitoba nedzimwe nzvimbo dze [Ontario ne] Quebec."
Yakabatanidzwa utachiona manejimendi (IPM) inosanganisa maturusi akasiyana - ehupenyu, epanyama uye emakemikari - kudzikisa njodzi kubva kuzvipukanana. Kana zvasvika pakutarisira CPB, IPM yakakosha. Zano rakakosha kwazvo mubhokisi revatengi revagadziri, Mwedzi inoti, ndiko kutenderera kwemakemikari. Beyond neonicotinoids (Boka 4A), kune makemikari kubva kumamwe mapoka akati wandei pamusika; anonyanyo shandiswa ndeeGroup 5 (spinosyns) uye Boka 28 (madhayidi).
Kusanganisa uye kutenderera machemistri kwakakosha kuti kurebesa kushandiswa kwezvigadzirwa izvi, asi sezvakakosha kubata kumwaya mushonga kudzamara zvikamu zvehupfumi zvasvika, anodaro. “Mbatatisi dzakashinga, dzine muzambiringa wakawanda uye dzinogona kukanganisa zvimwe. "Kana varimi vakwanisa kudzivisa kumwaya mishonga, izvozvo zvinobatsira kurebesa hupenyu hwezvigadzirwa."
ohn Gavloski ndiye anowedzera entomologist yeManitoba Zvekurima uye Resource Development. Mwaka wadarika, anodaro, Manitoba akaona zviitiko zvakati wandei zveCPB muna Chikunguru uye chikamu chekupedzisira chemwaka wekukura. "Zvimwe zveizvi, tinonzwa, zvaive zvekutiza, sezvo vazhinji vevarimi vairapwa mbeu kana muforow," anodaro. "Pane humbowo hwakanaka hwekuti mbatatisi dzinoramba." Kutenderera kwezvirimwa kune zvimwe zvinobatsira kuCPB sezvo ichiita nyuchi “shanda nesimba” kutsvaga minda yematatisi, anodaro Gavloski, kunyange hazvo chipembenene chinogona kufamba zviri nyore pakati peminda iri mukati memakiromita mamaira.
Iyo mbatatisi beetle yakatumidzwa seye poster zvipembenene zvekushora
"Isu tinopa zano vanhu kuti vaongorore uye vashandise zvikumbaridzo kuyedza kudzora kupopera kwemashizha," anodaro Gavloski. Anowedzera mbatatisi inokwanisa kutsungirira kusvibiswa makumi maviri neshanu kusvika makumi matatu muzana kana iwo ari mumatanho ehuswa, asi kana machubhu atanga kuwanda, ayo anotanga nguva pfupi ichangobuda maruva, anogona kungoshivirira anenge gumi muzana kushomeka. Nekuti huwandu hwevanhu hunogona kusvibisa zvinomera nekukurumidza, kurapwa kunowanzo shandiswa kana gumi muzana muzana defoliation yawanikwa. Makonye eCPB anodarika nematanho mana ekukura Machembera akura anokonzeresa kusvika pa25 muzana yekukuvara kwekudyisa. Kupfapfaidza, kana zvichidikanwa, kunofanirwa kupihwa nguva apo maruva ekare ari muchikamu chechitatu chekukura (anenge mamirimita mashanu pakureba), anodaro Gavloski. Makonye akakura zvakakwana anenge masere mm kureba.
Bayer nguva pfupi yadarika yakatanga chirongwa chitsva cheGroup 28 chakatengeswa pasi pezita rekutengeserana vayego® iyo inogona kushandiswa kudzora CPB pamwe nembatatisi nhata bete uye European chibage borer. Yechipiri-chizvarwa diamide (tetraniliprole), icho chigadzirwa chine zvakasara zvinodzora zvakaenzana kana kureba kupfuura chero zvimwe zvigadzirwa pamusika, Mwedzi inoti. “Gore rino tichave tichikurudzira kuvarimi kuti kana vachienda neonicotinoid kumberi, kana chengetedzo iyoyo yatanga kutyoka, vanogona kupinda nechinhu chakaita sevayego, chinofanira kuvapa kudzivirira kwevhiki mbiri. Izvi zvinogona kuvapfuudza panguva yakatarwa yekurima, ”anodaro.
Kuti kuwedzere kushandiswa kwechigadzirwa, Mwedzi inoti vagadziri vanofanirwa kuchinjira kuchigadzirwa cheGroup 5 kana chikumbiro chechipiri chemashizha chichifanira, kunyange chikumbiro chechipiri chingave chisingadiwe, sezvo vayego yakaratidzirwa kuve inoshanda kurwisa CPB pamatanho ese. “Mune chero munda wakapihwa une chero chinhu kubva mazai kusvika kuchina instar kusvika kuvanhu vakuru. Ndicho chinhu chakanaka nevayego - haufanire kunetseka nekuvanangisa padanho rekukura, ”anodaro.
Vayego ane mbiri-kunyorera chitambi, asi Mwedzi anoti Bayer haisi kukurudzira yechipiri Boka 28 kunyorera mumunda. "Hatidi kupisa Boka 28s," anoyambira. "Kana tichigona kutenderera pakati peeonics, Boka 28s uye Boka 5s, tinogona kuwana mubato wakanaka pakubata chirwere ichi kuenda kumberi." Darin Gibson, muongorori akazvimiririra naGaia Consulting muManitoba, akaita chibvumirano pakutsvaga vayego pakati pezvimwe zvigadzirwa. Anosimbisa kuti vayego inoita senge ine masimba akanaka ekudzora uye inoshanda pakurwisa makonye nevanhu vakuru.
Gibson anoti inogona kunge iri dambudziko kuyedza kudzora zvipembenene kana neonicotinoid iri kuputsa kutanga kwemwaka - asi zvakakosha kudzikisa mashandisirwo emamwe makemikari kusvikira anyatso kudikanwa. “Dzimwe nguva mabvi anokatyamadza kufunga kuti kana ukaona huwandu hwemazai nemaruva muchirimwa chako mushure mekunge neon yasakara, unofanira kupfapfaidza, asi unonyatsoda kumirira kusvikira uine maruva akakwana ipapo kuwedzera chikumbiro chako kudzora zvipembenene zvakawanda sezvaungagone, ”anodaro. "Izvi zvinogona kureva kushivirira kumwezve kuderedzwa."
Kudzivirirwa kwezvirimwa zvembatatisi
Zvimwe zvekufungisisa nezvezvipembenene
Bayer Sivanto® Prime insecticide (Boka 4D) inotarisa zvimwe zvinokanganisa tupukanana, kusanganisira hove nemashizha - zvichideredza kukanganisa kune zvipembenene zvinobatsira. Chigadzirwa chinopa kukurumidza kugogodza pamwe nekusara kwekudzora kwezvipfukuto zvinangwa; translaminar kufamba kunoreva zvipukanana pazasi pemashizha zvakanangwa.
Zvekudzora hove, psyllids uye whiteflies, Bayer's Movento® mishonga inouraya zvipembenene, Boka 23 (spirotetramat) kemesitiri, isarudzo inopa systemic uye residual control. Movento inoshanda nekudzivisa kugadzirwa kwezvipembenene 'lipid, izvo zvinopedzisira zvavauraya. Nekuti Movento inoshanda pakurwisa hove, inogona zvakare kudzikisira njodzi yehutachiona hwePatato Y (PVY). Chero kushandiswa kwekuuraya zvipembenene kunofanirwa kunge kuchitevedzwa muchirongwa cheIPM chinosanganisira kuongorora nekuchengeta zvinyorwa, uye kunosanganisira chishandiso chega chega chekudzvinyirira zvipembenene. Kuwedzeredza hupenyu hwezvipembenene kwakakosha.
Gibson anoratidza kuti vagadziri vanoedza kunyudza kuyedza kana vachifungidzira kuti vane kumwe kudzikisira kurasikirwa nehupfumi nekuda kwekusapfapfaidza isingabatsiri - inzira "yechikoro chekare", asi inogona kubatsira Iyo poindi, anodaro Gibson, ndeyekuti vagadziri vanofanira kuita zvese zvavanogona kuti vachengetedze mishonga yekuuraya zvipfukuto. “Chandinogara ndichiudza vanhu ndechekuti isu tinofanirwa kuita zvinhu zvakapusa sekutenderedza mapoka ezvipembenene uye kuongorora bvunzo uye kuongorora tisati tadzokera kuzvinhu zvekare zvakaita semasuwo, marimi uye migero. Hatidi kumbodzokera kune avo, ”anodaro.
Kuti uwane mamwe mashoko, shanya cropcience.bayer.ca/Products/Insecticides/Vayego.
Kubata tupukanana tudiki twakakosha senge Colorado mbatatisi nyuchi
/ dziviriro-dziviriro /
Tags: AdsBayercolorado mbatata nyuchizvigadzirwa zvekuchengetedza gohokusagadzikana
Mbatatisi yakasimba; kuora mwoyo ikozvino asi tariro yenguva yemberi
Nguva yeMaleic hydrazide (MH)?
Spore yekuteya tekinoroji yekutarisa kunonoka blight
Sei kubvisa zana matani dombo kubva mumunda?
Musangano wekubatana weInternet chirongwa chePotato Nhau nemuvambi weSoiltech Wireless Inc.